အသက် ၁၉ - ကျွန်ုပ်သည်ထူးဆန်းသောဝတ်စုံများဝတ်ဆင်ထားပြီးလိင်တံတွင်ခက်ခဲစွာနေနိုင်ခြင်းမရှိပါ - Your Brain On Porn
အသက် ၁၉ - ကျွန်ုပ်၌ထူးဆန်းသောဝတ်စုံများရှိပြီးလိင်ဆက်ဆံစဉ်ကပင်ခက်ခဲစွာမနေခဲ့ပါ
ယခုတွင်ငါသည်အတွက် 80 ထူးဆန်းရက်ပေါင်းယခု FAP နှင့်ငါသည်ဤလောက၏ဝက်အူများနှင့်လည်းသူကမှာတော်တော်လေးကောင်းသောအလုပ်လုပ်နိုင်တူသောငါခံစားလိုက်တယ် fetishes ခဲ့ရပြီးလိင်စဉ်အတွင်းခက်ခဲမနေနိုင်ဘူး။ လိင်စိုးရိမ်စိတ်ယခုတွင်ငါသည်ငါ၏အရည်းစားနဲ့အတူကြီးမြတ်လိင်ဆက်ဆံငါပယ်ရှားသွားပြီ။
ငါပြhadနာတက်တဲ့အခါသူမကငါနဲ့အတူရှိတယ်။ ယခုတွင်ငါသည်ကမ္ဘာကြီးကို fuck ဆိုတဲ့ချင်တယ်။ NoFap ကမင်းကိုလိမ်တာမလုပ်ဘူးဆိုတာငါသဘောတူတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါဟာနင့်ကိုချစ်တဲ့သူတိုင်းကိုလှည့်စားနေတယ်။
LINK - NoFap တစ်လိင်ဘုရားသခငျသညျသို့သငျသညျလှည့်?
အစောပိုင်းစာပို့ - 30 နေ့ကအစီရင်ခံစာ။ mum ငါပြု !!!
Viva La Vida သည်ကျွန်ုပ်၏ iTunes ပေါ်သို့တက်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်၏မိခင် NoFap သည်မည်သည့်သဲလွန်စကိုမျှမသိသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်၏မိခင်သည် NoFap ၏သဲလွန်စကိုမသိသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်၏မိခင်သည် NoFap ၏သဲလွန်စကိုမသိသောကြောင့်၊ ရက်ပေါင်း 30 ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ပိုမိုကောင်းမွန်သောလိင်မှုဆိုင်ရာဘဝ - ပါးစပ်နှင့်အမှန်တကယ်လိင်မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်သည်အလွန်ထိလွယ်ပြီးချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုခံစားမိသည်။ အခုတော့ jizzing မလုပ်ဘဲစောစောစီးစီး jizz လုပ်ရတာပေါ့။ ငါဟာကြာကြာနေဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေ့ကျင့်တော့မယ်။ ဒါပေမယ့်ငါအရမ်း ၀ မ်းသာမိတယ်။
ကြှနျတေျာ့စိတျထဲငါလေးတွေရှိနိုင်ပါသည်သဘောပေါက်လွယ်ကူမှာယခုဖြစ်ပါတယ်။ ငါအမှန်တကယ်နီးပါးအချက်ကိုမှာငိုကြွေးအော်ဟစ်မယ်လို့ DE (နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်) ရှိခဲ့သည့်အခါကျွန်မလိင်အရှိဆုံးသဘာဝအလမ်းရှိသည်ဖို့နိုင်တော့မည်မပြုစေခြင်းငှါ, ငါသညျငါ့သုက်ပိုးသို့မဟုတ်ငါနှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုရှိ (မအချို့ကအခြားမဟုတ်သောသဘာဝကလမ်းအေးခဲဖို့ရှိသည်မယ်လို့ ပြုပါပေမယ့်ငါမီတာနှင့် jizz နိုင်ပေမယ့်မပေးဘာ heck လိင်မှတဆင့်စဉ်းစားခဲ့သည်!) သူတွေကို။
အချို့သောအကြောင်းပြချက်များကြောင့်ကျွန်ုပ်၏အရေပြားသည်ရှင်းလင်းလာပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်ဝက်ခြံနှင့်အမြဲတမ်းပြproblemsနာများဖြစ်တတ်ပါသည်။ NoFap လား၊ နံပါတ် ၄ ဖြစ်သောကြောင့်…
ကျန်းမာသောအစားအစာ၊ နို့မဟုတ်သောအစာကိုမစားလိုသောအကြောင်းပြချက်အချို့ကြောင့်ကျွန်ုပ် NoFap ကကျွန်ုပ်၏ဆန္ဒကိုမြင့်မားသောစွမ်းအားပေးသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ အတိတ်တွင်ပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ရန်အလာတွင်ကျွန်ုပ်မည်မျှလွယ်ကူသည်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားမိသည်။
ပျမ်းမျှအားဖြင့်လေ့ကျင့်ခြင်း, ပျမ်းမျှအားဖြင့်4ရက်အားပြင်းထန်သော Sprint နှင့်ဘတ်စကက်ဘောအပေါငျးတို့သပေါ်နှင့် off ။ ငါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆီအနီးဘယ်နေရာမှာမဆိုပေမယ့် lol မှန်ကန်သောအသုံးအနှုန်းဖြစ်လျှင်ငါ၏အဖောင်းသွားပြီ။
“ Cons” ဒီဟာတွေကမကောင်းဘူးမဟုတ်ဘဲဒီမှာသင်ကြားတဲ့ဒဏ္moreာရီတွေပါ။
NoFap ကလူတွေကိုလူမှုရေးစိုးရိမ်မှုတွေကိုကုသပေးသလိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မယုံဘူး။ ငါရွေးချယ်လိုက်မယ်၊ NoFap ကမင်းရဲ့အလိုတော်စွမ်းအားကိုတည်ဆောက်ပေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကသင်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပြီးအဲဒါကို fuck လို့ထင်ရမယ်။ သူနဲ့သူနဲ့စကားပြောနေတာ၊ ငါဂရုမစိုက်ဘူး! NoFap လုပ်ခြင်းဖြင့်အိမ်၌ထိုင်ခြင်းသည်သင်၏လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုသက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်မည်ဟုမထင်နှင့်။ ယောက်ျားတစ်ယောက်က NoFap လိုပဲတစ်နေ့တာကိုတစ်ရက်ယူပြီးပြောတယ်၊ တစ်နေ့မှာသူစိမ်းကိုဟဲလိုလို့ပြောလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်။ Day 1 ကိုသူစိမ်းနှစ်ယောက်ဆီသို့နှုတ်ဆက်ပါ။ Day2သူစိမ်းသုံးယောက်အား Hello ကိုပြောပါ။ ထို့နောက်မည်သို့သွားမည်နည်းဟုမေးပါ။ ၎င်းသည်ဆိုင်ရှိအရောင်းလက်ထောက်သို့မဟုတ်နို့သမားသို့မဟုတ်ဖြတ်သွားသူတစ် ဦး အတွက်မင်္ဂလာပါ။
A သို့မဟုတ် B သည် NoFap ခရီးတွင်သူတို့အတွက်အလုပ်မလုပ်ဟုထင်သောသူများ၊ သို့သော်သူသည်အခြားသူတစ် ဦး အားကူညီခြင်းဖြင့် NoFap ကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှမိန်းကလေးများအနေဖြင့်သင်ကြည့်ရသောအရုပ်များကိုအလုပ်သို့လုပ်ခိုင်းမည်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်နှစ်လအတွင်းသင်လုပ်နိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်ဂိမ်းကစားခြင်းမှနှစ်ရက်လုံးလုံးနေ့ခင်းဘက်ကိုမမြင်နိုင်ခဲ့သည့် Reddit အသုံးပြုသူများသည်အထူးသဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ရန်မှာ shit အစုအဝေးဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာဤကဲ့သို့သောအရာသည်“ ငါခုနစ်ရက်ပတ်လုံး NoFap မတိုင်မီကအပျိုစင်ဘ ၀ ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ခြောက်ရက်မြောက်သောအချိန်၌ရှိသည်” ဟုဆိုသည်။ ထိုအရူးအမူးအတုများ (အများအားဖြင့်) ကျွန်ုပ်သည်အခြားသူတစ် ဦး ဦး ကိုဘာကြောင့်ဒီလိုမဖြစ်သေးတာလဲဟုစဉ်းစားစေခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ခရီးစဉ်တွင်နေပြီး REAL မှပို့စ်အတုတစ်ခုကိုမည်သို့ရှာဖွေရမည်ကိုမစိုးရိမ်ပါနှင့်။
ငါသည်ငါ၏အသက်တာ၌နောက်တဖန် FAP ရန်ရှိသည်မမြော်လင့်လျက်ကျန်းမာလိင်ဘဝနှင့်အထွေထွေအတွင်းကောင်းသောအသက်တာရှိသည်ဖို့ဆက်လက်။
PS ငါအသက် ၁၉ နှစ်နှင့်လန်ဒန်မှဖြစ်သည်။